Ndezvipi zviratidzo zvinokukoka iwe kuti utenge pamusika wemusika? | Ehupfumi Zvemari
Ndezvipi zviratidzo zvinokukoka iwe kuti utenge pamusika wemusika?
Imwe yenguva dzakasarudzika mukudyara hapana mubvunzo kana iwe uchiraira yako odha kuti utenge migove mumisika yemari. Zvichienderana nemutengo waunogadza, iko kuvhiya kunowana mukana wakakura kana kushoma wekutarisa. Izvo zvakakosha kuti kutenga kunoitwe pamatanho anonyanya kubatsira pazvido zvako sediki uye wepakati investor. Uye zvechokwadi haukwanise kukanganwa kuti hapana munhu anokumanikidza kuti uvhure zvinzvimbo. Asi chete muzviitiko zvakakunakira uye kwaunowana vimbiso dzakanakisisa dzekuzvipedza zvinobudirira.
Kutenga pamusika wemari ndicho chikamu chekutanga che maitiro ekudyara uye nekudaro iwe unofanirwa kuzvitarisira nemazvo chaizvo. Iwe haugone kuzviita pasina chero rudzi rwezano, asi zvinopesana, kana iwe ukaita uchiongorora kuti ndezvipi zvinangwa zvako. Iwe unofanirwa kuzvibvunza iwe zvaunoda nekutora zvinzvimbo, kwete chete mumatanda, asiwo mune chero hupfumi hwemari. Kubva pane zvakakosha simbi kune chero mari yakanyorwa pamisika mikuru yemari.
Kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uzive pamatanho api aunofanirwa kuronga zvitengwa mumari, tiri kuzokupa iwe nemamwe mazano ekugadzirisa kufamba uku. Kunyangwe ndeapi matanho akanyanya kunaka ekuvandudza mashandiro epotifoliyo yako yekudyara. Hazvizove zvakanyanya kukuomera kuti ushandise aya marongero ekuita. Iwe unongoda chete kufarira kushoma uye yakawanda kurairirwa kuti uzviite. Zvekuti kubva izvozvi mari yako inotanga kuve yakanyanya kudzivirirwa.
1 Kutenga pamusika wemasheya: zvichikwira zvinoitika
2 Kuramba kuputsa
3 Nekuumbwa kwepasi pasi
4 Kuumbwa kwemakakatanwa ekuwedzera
5 Oversold: kumisidzana kuita
Kutenga pamusika wemasheya: zvichikwira zvinoitika
Kana paine mamiriro akanaka ekutenga masheya, izvo hazvisi zvimwe kunze kwekunge iko kuitika kweiyo misika yemakero kuri pachena kushomeka. Iwe uchave uine yakawanda vimbiso yekukwirisa mashandiro. Nemukana mudiki wekuti iwe unogona kukanganisa mukutora. Zvirinani munguva pfupi nepakati. Kubva pane iyi nzira, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuvhura nzvimbo muzviitiko umo musika wemasheya unosimudzirwa kumusoro. Hazvishamisi kuti iwe une zvakawanda zvekuwana kupfuura kurasikirwa.
Mune zviitiko izvi, hauzokwanise kuramba kutumira odha kubhangi rako rekare kuti utsvage kudzoka pane yako yawakachengeta. Iyo nhoroondo yaunopa sewe investor haina basa. Nekuti zvirizvo, zvinoshanda kune vese vanochengetedza vanochengetedza uye vangango fungidzira. Iko hakuna kusarudzika kwakakosha kukwidziridza zvaunotenga mumisika yemari. Ehezve, mune chero mamiriro ezvinhu pasi peakanakisa mutengo wekutenga. Sezvo ivo vachizokupa iwe wakakura margin kuti utore mabhenefiti mune yega yega mashandiro aunoita.
Icho chinangwa chaunofanirwa kuzadzisa ndechekuti mutsauko uripakati pekutenga uye mutengo wekutengesa wakasiyana zvakasiyana sezvinobvira. Ichi chichava chiratidzo chiri pachena chekuti zvinhu zvave kukufambira zvakanaka mumisika yemari. Zvese zvisiri izvo izvi zvinodzosera kumashure zvido zvako. Hazvishamise kuti zvese izvo zvisiri kuhwina kukundikana kwauchazoita semudyari mudiki. Kunyangwe zvichishamisa kwazvo kuti iwe unogona kutadza mune yako kuverenga mune ekuwedzera zviitiko.
Icho chimwe chezviitiko zvakanakisa kudzivirira zvaunofarira. Kutora mukana wekuputsa kweanopokana chichava chimwe chezvinangwa zvakanyanya kukurumidza kutenga izvo zviito. Hazvishamise kuti iwo matanho ekuti mitengo yemugove inotungamirwa. Ne chengetedzo huru pamhedzisiro yekushanda kwemusika wemasheya. Aya mazinga mumutengo wemutengo anoshandiswa nevatengi kuisa mamiriro avo.
Njodzi chete inofungidzirwa neichi chiitiko ndechekuti inogona kunge iri kungotsausa kune vanoita mari. Nekuti ivo vanokwanisa kuenda pasi kumashoma mashoma emusika wemusika, kunyangwe isiri kufamba kunowanzoitika mumisika yemari. Asi pane izvo zvinopesana, zvakanyanya kushomeka mukuumbwa kwayo. Chero zvazvingaitika, kana vanopikisa vachinge vatyoka, unenge usisina sarudzo kunze kwekutora mukana nazvo uye kutenga chero mutengo. Ichakubatsira iwe kunatsiridza yako yekutarisa account balance kubva izvozvi zvichienda mberi.
Kutizira kune kumusoro muzviitiko izvi kune chisimba kwazvo. Nesimba rakakwirira rekuongorora, kunyanya mumazwi mapfupi kubva zvavakagadzirwa. Uye zvakare, icho chimiro icho iwe chaunogona kufungidzira nekujeka kukuru. Iwe hauchazoda ruzivo rwakakosha, kana kana kushandisa yakanyanya kujeka mifananidzo. Iko kufamba kunogona kucherechedzwa nechero chimiro chevarimi uye pasina kunze. Sezvo iwe zvave uchikwanisa kuverengera mune kumwe kwekuvhiya kunoitwa mumakore apfuura.
Nekuumbwa kwepasi pasi
Pasina kupokana, iyo yepasi pasi ichave imwe yemasaini akajeka ekuti iwe utange kutenga kwako mumari. Nekuti mukuita, ine zvine simba zvinowedzera pamusoro. Kunyangwe pamusoro pemamwe manhamba muhombodo yakakosha kukosha. Iko kukanganisa kukuru ndekwekuti iwe uchafanirwa kunyatsoteerera kuumbwa kwechimiro ichi panomira mapopoma. Asi kana iwe ukazviona, hapana mubvunzo kuti iwe uchave nechikamu chakakura chemabasa anoitwa mukuita kwako mune chero musika wezvemari.
Kusiyana nemamwe manhamba, iyo yepasi pasi inotakura nguva yakareba mune yayo nyowani maitiro. Zvinogona kutora makore mazhinji kuti iwe udzokere kune yakasarudzika kana kunyange lateral. Uye zvakare, iko kufamba kunowanzo kukura nehumwe huwandu mumutengo wezvikamu. Kwete zvisina maturo, ichagara ichivapo gore rega rega kuburikidza nemakambani akanyorwa pane makuru emisika yemasheya indices. Nekuti iyo yepazasi pasi ndiyo chaiyo yekumira kudonha mumitengo. Mune chero hupfumi hwemari maunogona kutora chinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi.
Chimwe chezvinangwa zvaunofanira kutsvaga mune zvako zvekudyara kuwana aya mazinga ekupinda mumisika yemari. Nekuti ivo vanokupa iwe yakakura vimbiso yekuti iyo shanduko yeako yekudyara portfolio ichave yakanyanya kunaka. Iine yakanyanya kukwirira yekuongorora mikana uye pamusoro peiyo inogadzirwa nemamwe marongero ekudyara. Kana yako sarudzo saka yekutenga masheya, hauzombozvidemba nezano rakatorwa.
Kuumbwa kwemakakatanwa ekuwedzera
Imwe yeiyo manhamba anoratidza kutorwa kwenzvimbo mune akakosha kukosha emari yenyika inoshanduka. Nekuti zvirizvo, zvakare ine zvakakosha zvakanyanya mukukosha kwekusimudzira. Kunyangwe uine dambudziko guru rekuti iwe uchazoda rubatsiro rweiyo graphic ine simba uko kuumbwa kwechimiro chakakosha ichi kunoratidzwa. Havasi vese varairidzi vanozokwanisa kuzadzikisa zvinangwa izvi. Nekuti icho chimiro hachizivikanwe nekukurumidza uye mune zvese zviitiko. Chete kana iwe uine ruzivo rwakakura mumisika yezvemari ndipo paunogona kuve munzvimbo iri nani yekuzviona munguva. Nekuti izvi ndizvo chaizvo zvimwe zvezvinetso zvavo, vanosvika pakukwiridzira pakatarisana panguva chaiyo yavanokura. Ichave imwe kiyi yekugadzirisa mashandiro.
Kusiyana nemamwe manhamba akasimba, maburi ekusimudzira anosanganiswa nemapfupi nguva. Ivo akakodzera kwazvo kune mamwe ekufungidzira mashandiro. Zvakare kune intraday kana chii chakafanana, mafambiro akagadzirwa mune imwecheteyo yekutengesa chikamu. Uku ndiko kumwe kwemasiyano anowanikwa nemipendero yekusvikira pakuumbwa kwavo. Kunyangwe ichiwanzoitika, uye nekufamba kwenguva, zvinowanzo zadza. Kuti uenderere mberi neyekare uptrend.
Oversold: kumisidzana kuita
Zvakare izvi zviitiko zvinowanzoitika kwauri kuti utenge migove yemakambani akanyorwa. Nenzvimbo yepamusoro yekuchengetedzeka kazhinji. Zvisinei, iwe unogona kuve nerupfupi kumusoro kumusoro rwendo. Kusvika padanho rekuti inogona kuita zvechinguva uye kubata nguva. Iwe unofanirwa kukurumidza kwazvo kana uchigadzirisa mashandiro ako kana uchitenga chero hupfumi hwemari. Uye havazi vese vatengesi vari mune yakanakisa mamiriro ekuvhura zvinzvimbo pasi peaya maficha emisika yemari.
Iyo inzvimbo mumitengo yemitengo uko nzvimbo dzekutengesa dzinonyanya pamusoro pevatengi. Uye sekuita kune ino maitiro, kugadzirisa mumutemo wekupa uye kudiwa kunoitwazve. Semhedzisiro yeizvi, pane kuita kwenzvimbo dzekutenga uye izvo zvinokonzeresa kuti iwe ugone kutenga masheya kuyedza kuita kuti kuchengetedza kunobatsira mune ipfupi nguva. Kusvika izvo zvido pakati pevatambi mune ino maitiro zvaringana. Panguva iyoyo, ichave nguva yekuti iwe ubvise zvinzvimbo uye utore mari inowanikwa kubva pakutenga kwako.
Sezvawaona kusvika parizvino, kune akawanda mazinga ekupinda aunofanirwa kugadzirisa zvaunotenga, asi uine yakawanda vimbiso yekubudirira. Kwete pasina kuongorora kwakadzama kweese manhamba atakakuratidza iwe kuti uite kuti mari yakadyarwa ibatsire. Kuziva kuti iyo inofanirwa kuzadzikiswa neye yakanaka kutengesa oparesheni. Ichave iri yakanakisa mamiriro kubva ikozvino. Iko rombo rakanaka richava chimwe chezvinhu zvinotarisisa mhedzisiro yemari yako. Chero zvazvingaitika, iwe une akati wandei manhamba `kuitira kuti ugone kukunda zvinangwa nenzira inokurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndezvipi zviratidzo zvinokukoka iwe kuti utenge pamusika wemusika?
Chinja kubhengi mogeji
Ndeapi masekete anogona kubatsirwa kubva padanho rekukwira?